IHuawei isebenza kwi-smartphone eguqukayo | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, i-Samsung ibonise ividiyo apho sinokuzibona khona izibonelelo esinokusinikwa yi-smartphone okanye ukusonga isixhobo se-elektroniki. Usibonisile izibonelelo kuba ebesele eqale ukusebenza kwitekhnoloji eza kuyivumela. Kodwa ayinguye yedwa, NjengeSamsung, i-LG isebenze iminyaka embalwa kwisixhobo esinokusinika isikrini sokusonga ukunika elona nani likhulu lolwazi kwindawo encinci. Kodwa kubonakala ngathi ngaphandle kwamaKorea, kukho abanye abavelisi bee-smartphone abebesebenza kuyo okwethutyana. IHuawei ibhengeze ukuba kungekudala okanye kamva inokuba nemodeli ye-smartphone enesikrini sokusonga esisebenza ngokupheleleyo.
URichard Yu, u-CEO weHuawei, uthi ngoku basebenza kwiprototype, kodwa khange achaze ukuba isixhobo asebenza kuso siza kubandakanya izikrini ezimbini ezahlukeneyo okanye enye, esithi Umceli mngeni abajongene nawo kukuzama ukuphelisa indawo ekhoyo phakathi kwabo. Okwangoku abenzi besikrini abaphambili kwihlabathi liphela zi-LG kunye ne-Samsung, yiyo loo nto zombini iinkampani bezizama iminyaka eliqela ukubonelela ngezixhobo ze-serial ngezi ntlobo zeempawu.
IHuawei ayinazo iifektri ezinikezelwe ekwenziweni kwezikrini, kungoko kunokwenzeka ukuba isibhengezo osenzileyo asihambelani nescreen esiguqukayo, njengoko ubufuna ukuthambeka, kodwa kunokuba sisixhobo esinezikrini ezibini ezizimeleyo nangona zombini zinokubonisa ngokudibeneyo idesktop ekwabelwana ngayo.
Asazi ukuba le teknoloji izakufumaneka nini ebantwini, kodwa kubonakala kum oko kusekutsha kakhulu kuthi ukuba sonwabele i-smartphone esongayo ukuba inokuguqulwa ngokukhawuleza ibe yicwecwe, ukuba sijonga ukuba ziimodeli esizibonileyo ezigoba kancinci ngaphandle kokugoba ngokupheleleyo, njengakwividiyo endiyichazile ngasentla kwi-Samsung.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IHuawei isebenza kwi-smartphone eguquguqukayo
Bavavanya ukuthembeka kothungelwano lwefiber optic ukufumana iinyikima